I-Madhya Pradesh Wildlife Tour | Shayela @ + 91-993.702.7574 Ukubhuka.
I-Madhya Pradesh Wildlife Tour
Ingabe ungumuntu wemvelo nesithandwa sasendle? I-Madhya Pradesh Wildlife Tour izokunika ithuba lokuchitha isikhathi enkampanini yezilwane nezinye izitshalo ezingavamile. Ungakwazi ukwenza ngokwezifiso amaholide akho ngokusho okuthandayo. Hamba uhambo lwe-safari olujabulisayo phakathi nosuku bese uchitha ubusuku ehlane ehlathini ekamu noma e-resort. I-Madhya Pradesh Wildlife Tour ikuthatha ezinye zepaki ezidume kakhulu zasendle e-India, kufaka phakathi i-Bandhavgarh National Park, i-Kanha National Park ne-Pench National Park. Amahlathi e Madhya Pradesh bhala ngezilwane ezihlukahlukene zasendle. Kusukela ku-tiger enkulu kakhulu kuya ezinhlobonhlobo ezinkulu, kusukela ku-chital ezihamba ngezinyawo ezinyoni ezimibalabala ezimibalabala, ungathola izinto ezithinta umoya lapho uphendukela eMadhya Pradesh Wildlife Tour. Uhambo luqala ukusuka eDelhi & luphela e-Khajuraho. Incwadi yeMadhya Pradesh Wildlife Tour kanye nathi futhi ujabulele ubuhle bemvelo kanye nazo zonke izinhlobo ezincane nezinkulu ezihlala lapha.
I-New Delhi-iPench National Park- I-Kanha National Park- I-Bandhavgarh National Park-I-Panna National Park -Khajuraho-New Delhi
Uhlelo lwe-12 Nights
Lapho ufika uzokwamukelwa ummeleli wethu ngesitayela se-Welcome Welcome bese uhanjiswa ku-HOTEL Rest of the day ngesikhathi sokuzilibazisa.
Phuma ekuvakasheni kwe-Old and New Delhi okubandakanya ukuvakashela ku-Chandni Chowk, Jama Masjid, ethuneni lika-Humayun, Qutub Minar, Raj Ghat, Isango laseNdiya, iNdlu kaMengameli. Kusihlwa ukuthenga ezungeze emigwaqweni ekhanyayo yeConnaught Place.
USUKU LWE-03: I-NATIONAL PARK NAGPUR-PENCH
Uyodluliselwa esikhumulweni sezindiza ukuze ugibele indiza ekuseni ngoba uNagpur uhamba e-08: I-55 ngifika ku-10: 35 uzokwamukelwa bese ushayela ngqo ku-Pench National Park bese ungena ehhotela lakho. Ngemuva kokudla kwasemini uhambe ngaphandle kwe-jungle safari ngaphakathi ngaphakathi epaki kazwelonke.
DAY 04: PARK NATIONAL PENCH
Jabulela i-jeep safari ekuseni nasebusuku ngaphakathi kwepaki kazwelonke.
USUKU 05: KANHA NATIONAL PARK
Ngemuva kokudla kwasekuseni ekuseni kuya ngqo ezweni laseP Kipling -. I-Kanha National Park. Ngemuva kwamahora amathathu enhle ukufika e-Kanha futhi uhlole enye indawo ye-jungle. Ngemuva kokudla kwasemini uhambe ngaphandle kwe-jungle jeep safari ngaphakathi kwepaki kazwelonke bese ubona iMighty TIGER.
USUKU 06: KANHA NATIONAL PARK
Ekuseni kusetshenziselwe ukuvakasha kwe-jungle safari egcwele epakini. Futhi ujabulele ukugibela indlovu ngesikhathi se-Tiger Show. Ngemuva kokudla kwasemini uphinde uphume ngaphakathi ngaphakathi epaki kazwelonke.
DAY 07: PARK PARK BANDHAVGARH
Ngemuva kokuhamba kwe-safari ye-jungle ekuseni ku-Bandhavgarh lapho ufika ungena ehhotela lakho.
DAY 08: PARK PARK BANDHAVGARH
Ekuseni uzoyiswa epaki ku-jeep evulekile. Umvelo wemvelo uzokutshela mayelana nepaki. Uma unenhlanhla ungabona inkosi (TIGER) ekuhambeni kwakho kokuqala eya epaki kazwelonke. Ngemuva kokudla kwasemini uphinde uphinde uphume futhi ujabule i-jeple jeep safari ngaphakathi epaki kazwelonke.
DAY 09: PARK PARK BANDHAVGARH
Ekuseni ekuseni uphumelele e-jungle jeep safari, uzophinde uthathwe ngemuva kwendlovu ngaphakathi ngaphakathi epaki kazwelonke ukuze ubone i-Mighty Tiger. Ngemuva kokudla kwasemini uphinde uphinde uphinde uhambe emgwaqweni wamahlathi e-gypsy evulekile.
Ngemuva kokudla kwasekuseni ekuseni kuya ngqo ePanna National Park. Lapho ufika ungena ku-HOTEL. Ngemuva kokudla kwasemini ukuphuma ejungle jeep safari ngaphakathi ngaphakathi epaki kazwelonke.
Shayela ngqo ku-Khajuraho ekuseni bese ungena ku-HOTEL. Phuma ukuze ubone indawo yamathempeli ahloniphekile e-Khajuraho.
Bhodi indiza eDelhi. Lapho ufika eDelhi uzodluliselwa esikebheni sezindiza International ukuze ugibele indiza ukuze uhambe phambili.